အခြားမော်ကွန်းတိုက် | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာသတင်း ၂၀၂၀ NAB Show News: တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ။ NAB ပြရန် 2021 ။
Pebble သည် Pebble Control ကိုလွှတ်တင်ပြီး IP ကွန်ယက်ထောက်ပံ့မှုကိုအရှိန်မြှင့်သည်
PNYA ၏ပုံရိပ်သိပ္ပံကိုလေ့လာရန်“ Post Break”
Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ (MPSE) ကို 68th နှစ်ပတ်လည်ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲကိုတင်ပြမည်
ကျော်ကြားသောဥရောပသုတေသနတက္ကသိုလ်သည် UV-C Boxer သည် ၃ မိနစ်အတွင်း Covid-19 မှထုတ်လုပ်သည့်ဂီယာကိုပိုးသတ်ဆေးမိစေရန်ဒုတိယမြောက်ဖြစ်လာသည်။
ASG ဥက္ကPresident္ဌ Dave Van Hoy သည် SVG Systems Integrator Summit တွင် Cloud အခြေပြုထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
KulturMachtPotsdam Arts Livestream သည် ATEM Mini Extreme မှစွမ်းအားရှိသည်
reffanding အမှတ်တံဆိပ်အတွက် WFMJ သည် StreamMaster PRIME ကိုရွေးချယ်သည်
Bitcentral လောင်စာဆီပရိသတ်များရောက်ရှိခြင်းနှင့် NewsON တွင် Cowles အသံလွှင့်ခြင်းအတွက်ငွေကြေးအသစ်များရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများ
Signature သည် remotelink များကို virtual event များသို့ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Quicklink Studio ကိုမိတ်ဆက်သည်
နိုင်ငံတကာအရောင်းအဖွဲ့သည် Charlie Day အား Global Partner Manager အဖြစ်ခန့်အပ်သည်
Turbo ကိုတီထွင်ရန်နောက်ဆုံး NetRange တိုးတက်မှုများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လျှော့ချထားသော CAPEX & OPEX နှင့်ကြော်ငြာခြင်းအခွင့်အလမ်းအသစ်များမှတစ်ဆင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စမတ်တီဗီဈေးကွက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
Unified Streaming သည် Unified Remix VOD2Live ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် OTT ပံ့ပိုးပေးသူများအား VOD စာကြည့်တိုက်များမှတိုက်ရိုက်ချန်နယ်များဖန်တီးနိုင်သည်။
SMPTE Hollywood မှ“ The Ripple Effect” မှ Virtual နှင့် Remote Solutions ကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။
Amazon Prime Channel များမှ BritBox UK အတွက်ပြင်ဆင်ရန် ITV သည် Telestream Cloud Services ကိုအသုံးပြုသည်
တိုက်ရိုက် Webinar - Matrox IP KVM သည်သင်ဖြန့်ဝေထားသောလုပ်သားအင်အား၏စိန်ခေါ်မှုများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းသနည်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အခြားသတင်းများ
2017 #NABShow ပါတီစာရင်း
2017 NAB Show After ပါတီပွဲများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မပြောလျှင် NAB Show နှင့်သက်ဆိုင်သောပျော်ရွှင်မှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့စွန့်လွှတ်လိမ့်မည်! အောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ။ NAB Show ပါတီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက click လုပ်ပါ။ အချို့သည်သီးသန့်ဖြစ်စေ၊ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဤစာရင်းသည်ပြေးနေသောစာရင်းဖြစ်ပြီးသင်တွေ့ရှိရမည့်အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတို့ ...
လူငယ်ကဏ္ဍများအတွက် Next ကိုကြီးရာ: Hybrid ကိုယာဉ်?
သတင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသကဲ့သို့ပင်ဒေသခံဘူတာအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကို, အထူးပြု apps များ, အမျိုးသားရေးမီဒီယာ, နှင့်အိမ်နီးချင်းဒေသများတွင်အချို့ကိစ္စများတွင်ပိုမိုကြီးမားဘူတာနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်ရှိသည်။ ပရိသတ်တွေသူတို့တခြားနေရာကိုမတှေ့နိုငျသောအကြောင်းအရာများကိုဒေသခံဘူတာမှကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအပြိုင်ခုနှစ်, စုစည်းတင်ဆက်အကြောင်းအရာအချို့အမျိုးအစားများကုန်ကျစရိတ်, ဘူတာကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘို့လျော့နည်းစီးပွားရေးဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဒီတော့ဘယ်လို ...
Comcast, 'အဆိုပါတံတား' 'အဘို့အ FX စမ်းသပ်ခြင်းတိုက်ရိုက်တီဗီ / VOD Hybrid ကို
[ad_1] Broadcasting & Cable မှသတင်းပို့ချက်များ“ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနအသီးသီးမှလက်ရှိရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုချင်းစီတွင်ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကြည့်ရှုသူများသည် The Bridge ၏ VOD ပေါ်ရှိနောက်အပိုင်း (ပုံမှန်ကြော်ငြာဝန်နှင့်တွဲဖက်ထားသည့်) နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့် MSO နှင့် FX သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြီးဆုံးကြောင်း Comcast ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ။ [ad_2]
မကြာခင်မှာပဲ Xbox One မှာပေါ်စတင်ရန်မှ Reddit app ကို
[ad_1] GamesIndustryBiz မှဖော်ပြခဲ့သည်မှာ“ Xbox One သည်သုံးစွဲသူများအားအငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောအင်တာနက်အသိုင်းအဝိုင်း Reddit ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မည့်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုအတွက်အိမ်ဖြစ်သည်။ Microsoft ၏ Larry Hyrb ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ [ad_2]
Q2 အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာ့ဖလား Doubles အမြတ်
[ad_1] GamesIndustryBiz "ဒီတရုတ်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသူပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာ့ဖလားက၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုအစုစုကိုဖြတ်ပြီးအားကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက်ဒုတိယပြက္ခဒိန်သုံးလပတ်အတွက်၎င်း၏အမြတ်ငွေနှစ်ဆတိုး။ " သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ [ad_2]
Guillemot: Wii U ပိုင်ရှင်များ "ရင့်ကျက်" ဂိမ်းများဝယ်ရန်မ
[ad_1] GamesIndustryBiz က Ubisoft ၏စီအီးအို Yves Guillemot က၎င်းသည်ရင့်ကျက်သောဂိမ်းများအတွက်ပလက်ဖောင်းမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ။ [ad_2]
GuardiCore အတွင်းမှာပဲမှဒေတာစင်တာများကာကွယ်ပါမှ $ 11 သန်းပေါ်ပေါက်
[ad_1] VentureBeat "ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒေတာစင်တာများကြည့်ရှုခြင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများပိတ်ဆို့ခြင်းထိရောက်သောမဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ " သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ [ad_2]
Nuzzel သင်ထိပ်တန်းတည်ထောင်သူများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏စာဖတ်ခြင်း Lists မတင်ဆက်
[ad_1] VentureBeat "လူမှုသတင်းစုစည်း Nuzzel ထိပ်အကျိုးတူမြို့တော်ကုမ္ပဏီတွေမှာတည်ထောင်သူနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနေ့တိုင်းဖတ်နေနေကြတယ်ဆိုတာကိုပြသသောထုံးစံသတင်း feed ကိုစာမျက်နှာများတွင်လက်တဆုပ်စာကိုထုတ်လှိမ့်သည်။ " ကတင်ပြထားပါတယ်။ [ad_2]
1 ၏စာမျက်နှာ 612345 » ...နောက်ဆုံး»
ဂတ်စ်ထုတ်လုပ်မှု - Medic သတ်မှတ်မည်
ဂတ်စ်ထုတ်လုပ်မှု - ကင်မရာ Op
သာ costume designer
ဂတ်စ်ထုတ်လုပ်မှု - အသံက Op
ရွေ့လျားဂရပ်ဖစ် | Animator
ရုပ်ရှင် Featureer စာရေးဆရာ
Broadcast Beat သည်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည် NAB ပြရန် လာမည့် ၂၀၂၁ အတွက်အသက်ရှင်ပါ NAB ပြရန် Las Vegas မှာ။
မူပိုင်ခွင့်© 2020 broadcastbeat.com။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ ဤနေရာတွင်ပေါ်ထွက်လာသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မူပိုင်ခွင့်များသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
BroadcastBeat.com သည် BB Media Group Corporation ၏ Digital Media Property ဖြစ်သည်။